Kintan'i Adama kely ~ Journey-Assist - mahaliana any Sri Lanka
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Fampahavian'i Sri Lanka » Tendrombohitra kely an'i Adama
Kintan'i Adama kely
2 Janoary, 2020
Tendrombohitra kely an'i Adama. Fampahalalana fohy
Fiakarana eo an-tampon'ny tampon-tanan'i Adama
Soso-kevitra alohan'ny fiakarana
Inona no miandry eo an-tampony
Ny trano fandraisam-bahiny akaikin 'ny tampon' i Adam's Small Peak
Weather near Peak
Fampahalalana mifandray. Manondro ny sarintany
Tendrombohitra kely an'i Adam eo amin'ny sarintany
Tendrombohitra kely an'i Adama: Famintinana iray
Ity tendrombohitra ity dia misy ao amin'ny faritanin'i Sri Lankan any Uva, 2 km atsinanan'ny tanànan'i Ella. Nahazo voninahitra ho azy izy Ny tendron'i Adam - tendrombohitra iray hafa kokoa any Sri Lanka, izay ivavahan'ny mpino iray amin'ny finoana efatra.
Ny haavon'ilay haavon-tendron'ilay Vondron-tantely Adama dia 1 141 m.
Ity tendrombohitra ity dia manintona mpizahatany maro izay tonga any Sri Lanka ary mampiseho fahalianana amin'ny endriky ny firenena, anisan'izany ny velarantany an-tendrombohitra. Ny fiakarana eo an-tampon'ny tampon-tampon'i Adama dia tsy asa sarotra mihitsy, fa ny panam-baravarana izay misokatra avy any ambony dia ho mendrika kokoa.
Rehefa mitaingina ireo fambolena dite, riandrano ary an-tsaha misy salohim-bary dia afaka mankafy ny tendrombohitra mahafinaritra ianao.
Tendrombohitra kely an'i Adam ho mariky ny marika
Tao anatin'ny taona vitsivitsy izay, ny Tendrombohitra kely an'i Adama dia nanjary iray amin'ireo singa mahasarika an'i Ella. Ny fotoana tsara indrindra hiakatra eny an-tampony dia amin'ny maraina maraina, arakaraka ny hain'ny hafanana any aoriana. Tsiahivina mafy ny mitondra kitapo kely misy kitapo entina hametrahan-tsetroka sy famatsian-drano (na tsara kokoa, thermos feno dite mafana ary sakafo sasany). Kiraro dia tokony hanaovana kiraro fitsangatsanganana an-tongotra na azo antoka. Ilaina ihany koa ny maka fakantsary iray, satria misy zavatra azo alaina sary.
Ahoana ny fomba mankany amin'ny Lalan'i Adama kely ao amin'i Ella ka miakatra
Ny mandeha any Ella mankany amin'ny tendron'i Adama kely dia tena mora mandeha an-tongotra. Amin'ity tranga ity dia very tsy mandeha ny fahapotehana. Avy any amin'ny lalan-dàlan'ny làlan-dàlambe lehibe ao Ella ao afovoan'ity tanàna ity, mila mandeha manaraka ny lalana Passara atsinanana mankany an-tendrombohitra ianao. Eo amin'ny lohalika akaikin'ny Ella Flower Garden Hotel dia mila mitodika mankany amin'ny lalana maloto mankany amin'ny tendrombohitra (misy famantarana).
Hafiriana ny fiakarana
Raha hihanika ny tampon-tany dia tsy maintsy mandany 1,5 ora ianao. Amin'ity tranga ity, ny fiakarana dia toy ny fitsangatsanganana tsotra. Rehefa afaka 15 minitra an-tongotra miala an'i Ella manaraka ny Passara dia afaka mahatratra ny tongotry ny tendrombohitra ianao. Lalana miakatra miakatra miaraka amin'ny zigzags marobe mandalo fambolena sy ala matevina. Ny any ambony dia manome fomba fijery mahavariana momba ny tendrombohitra Ella sy ireo rohy hafa eo akaikiny izay manasaraka lohasaha sy gorges.
Tokony hametraka amin'ny taratasin'i Sri Lankan kely ianao mba hahafahanao manome zavatra amin'ny mpividy dite (raha te-haka sary azy any am-piasana)
Ilaina koa ny maka rano miaraka aminao, ary raha misokatra ny lanitra dia aza hadino ny mametraka zavatra eo amin'ny lohanao.
Manomboka amin'ny fiakarana maraina amin'ny fiakarana vao miakatra ny masoandro mandra-panotin'ny masoandro be loatra.
Aza hadino fa aorian'ny 17.00 ora maraina dia manomboka maizimaizina haingana
Indray andro dia afaka manambatra ny fiakarana ho any an-tampon-tendron'i Adama ianao miaraka amin'ny fiakarana mankany an-tendrombohitra Ella, izay eo akaikin'ny vavahady.
Tsy voalaza ny han kunona ny Faha-Solon-kely Adin'i Adam amin'ny orana. Ny ampahany dia ahitana tanimanga, izay mivadika ho loto amin'ny orana.
Inona no miandry eo ambony
Ny tanànan'i Ella dia hita avy any ambony, voahodidin'ny riandrano, tendrombohitra, lava-bato, sns. Amin'ny sokajy izay dia tsy azo atao ny manimba ireo zavamaniry mitombo eto ary manimba ny biby ao an-toerana.
Filentehan'ny masoandro any an-tendrombohitra. Tendrombohitra kely an'i Adama
Ny tontonana eo amin'ny tampon-jaza kely an'i Adama dia mijery tsara amin'ny hariva, mandritra ny masoandro mody Amin'izao fotoana izao dia afaka maka sary tsara tarehy ianao, izay hahita ny masoandro miposaka any an-tendrombohitra.
Sarivongan'i Buddha ao amin'ny tampon-tanànan'i Adam's
Ao amin'ny tampony indrindra dia misy roa statistika buddha ary ny foza fandinihana no misy. Avy amin'io dia azonao jerena ny terrain 360 degre. Na dia amin'ity tranokala ity aza dia afaka manaraka bebe kokoa ianao - manodidina ny 500 m, eo amin'ilay lalambe, izay misy teboka marobe kokoa.
Bouddha iray hafa eo amin'ny tendron'i Adam's Small
Teny an-dàlana dia afaka mahita trolls (fiara misy tariby) ianao. Afaka midina io tady io 550 m sy 82 m midina. Ny vidin'ny fialamboly toy izany dia 3500 rupee (eo ho eo amin'ny 20 $).
Misy fidiovana fidiovana ao.
Rehefa mampitaha ny tampon-javak'i Adama kely miaraka amin'ny Tendrombohitra Ella Rock, dia azo marihina fa ny tendrony voalohany dia manome fomba fijery mahavariana, saingy ny tanànan'i Ella no mitana toerana lehibe ao anatiny. Ankoatra izany, mora kokoa noho ny fiakarana an'i Ella Rock ny fiakarana havoakan'i Adam's, saingy misy mpizahatany matetika kokoa ao amin'ny tendrombohitra voalohany.
Ahoana ny fomba hahazoana any amin'ny Lalan-tampon'ny Adama
Amin'ny lamasinina na fiara fitaterana.
Ao amin'i Ella avy any Colombo - amin'ny lamasinina.
Ao amin'i Ella avy any Negombo: voalohany avy any Negombo mankany Colombo amin'ny bus, avy eo Colombo mandeha fiaran-dalamby mankany Ella.
Ho an'i Ella avy ao Kandy, na ny lamasinina na fiara fitaterana.
Avy amin'i Mirissa mankany Ella: Voalohany mila mila bus ianao manomboka any Mirissa ka Matara. Avy eo dia mandeha ao Matara mankany Monaragal ny fiara fitateram-bahoaka (tsy misy fiara mandeha mankany Ella avy ao Matara). Mila miala eny amin'ny lalana farany ao an-tanànan'i Velavaya (akaikin'i Ella) ianao. Ary ao amin'ny Velaway dia afaka maka tuk-tuk amin'i Ella ianao.
Ho an'i Ella avy any Badulla, afaka mandeha bisy na lamasinina ianao.
Eny an-tongotra avy amin'i Ella
Manomboka eo afovoan-tanànan'i Ella ka hatrany an-tongotry ny tampon-tampon’I Manondron-dohan’i Adama tokony ho 45 minitra.
Hotely akaikin'ny Adam's Little Peak (ao Ella)
Toerana akaikin'ny Tendrombohitra Adam sy Ella. Azo tanterahina sy lavitra an'izany!
Widget niova fo feno. Azonao atao ny manova ny sosona ho mety aminao (rivotra, orana, kotrokorana, rahona, sns). Any amin'ny faran'ny sarintany, azonao jerena ny toetr'andro toetr'andro mandritra ny telo andro manaraka.
Address: Ella - Passara Rd, Ella 90090, Sri Lanka
telefaonina: + 94 71 869 0837
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //g.page/YogaE? mizara
Tendrombohitra Adam Adam ao amin'ny sarintany
Sinton'ny valalan'i Adam kely
Adam Small Peak Review (Google reviews)
Adam Small Peak Review (Tripadvisor)
Tsara ny fomba fijery avy aminy ...
amin'ny zavatra tsara lavitra noho ny tampon 'i Adama. kokoa saturated na zavatra iray.
Ary ny fiakarana dia mora, na dia ny ankizy aza dia mahaizy. Mety ho voatambatra tsara miaraka amin'i Ella, ary hivadika ho fitaovana tena mahomby ilay andro.
Super pan panamas! Raha jerena fa 40 minitra fotsiny ny fiakarana azy, ary fofonaina ny fijery, ny tendro kely an'i Adama dia karazana kalitao miampy vidiny eo amin'ny tontolon'ny mahasarika. Ho an'ny olona kamo be tokoa, antsasaky ny fomba ahafahanao mitondra fi-tuk amin'ny ankapobeny.
Ny mampalahelo irery dia hoe maro be ny olona any. Ary ny sisa, toerana mahafinaritra miaraka amin'ny fijery mahafinaritra!
Manoro hevitra mafy aho amin'ny rehetra izay mandalo any Sri Lanka. Ary ny haavo kely an'i Adama sy Ella, izay mifanohitra mivantana.
Salanisan'ny salanisa 5 / 5. Isan'ny isa: 17